Kanjani Amazwana Impact Search Engine Rank | Martech Zone
Kanjani Amazwana Impact Search Engine Rank
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 27, 2010 NgoLwesihlanu, Okthoba 17, 2014 U-Adam Encane
Ngabe ukuphawula kwamanye amabhulogi kuyangisiza ukuthi ngikleliswe enjini yami yokusesha? Isilinganiso se-algorithm seGoogle sisinda kakhulu kuzixhumanisi ezifanele ezibuyela kusayithi lakho. Njengoba izixhumanisi ezibuyela kusiza sakho zisiza, bekungeke yini kunengqondo ukuthi ukuphawula nokushiya izixhumanisi zakho yonke indawo kungazuzisa isiza sakho? Hhayi kahle.
Kule vidiyo yakamuva, Matt Cutts (Ikhwalithi yosesho ye-Google) ixoxa ngobungozi obungahle bube khona bokuvumela abasebenzisi ukuthi babhale imibono nge-link yogaxekile kubhulogi yakho. Unokulawula okuqukethwe kuwebhusayithi yakho, futhi uma i-Google ikubamba uxhumanisa namawebhusayithi we-spammy, kungenzeka ukuthi abheke newebhusayithi yakho njengogaxekile.
Ubuye athinte nesizathu sokuthi iGoogle ijwayele ayijezisi iwebhusayithi yakho ngezixhumanisi ezingaphakathi kwemingcele ye-spammy. Uma iGoogle ijezisa amawebhusayithi nganoma yiluphi uhlobo lwezixhumanisi eziboshiwe, izimbangi zingabe zakha izixhumanisi ezimbi kakhulu komunye nomunye ukuzama ukususa ukuncintisana emiphumeleni yosesho.
Kusenamabhulogi amaningi angangezi amafayela we- rel = "akukho okulandelayo" unikeze izixhumanisi zokuphawula. Kungani umnikazi webhulogi angafuna ukwenza lokhu?
A landela ibhulogi isixhumanisi sokuphawula singumvuzo olula kubasebenzisi abengeza imibono ebalulekile nempendulo. Umnikazi webhulogi uthola ukuphawula okubalulekile okwenziwe ngumsebenzisi futhi isivakashi esishiya amazwana amahle sithola isixhumanisi esilandelanayo. Amabhulogi amaningi avumela izixhumanisi zamazwana alandelanayo ngokulingene alinganise lawo mazwana nezixhumanisi, ngakho-ke akunakwenzeka ukuthi ubalekele ukuthumela isixhumanisi ngaphandle kokuthi amazwana akho anikele futhi engeza inani kokuthunyelwe kwebhulogi.
Esinye isizathu ibhulogi ingavumela ukuphawula okungafani nalokhu ukuthi ngabe ibhulogi ibilokhu ikhona isikhathi eside futhi umnikazi engayivuseleli ipulatifomu kaningi. Kukholwe noma ungakukholwa, kunezinkulungwane zamabhulogi ezingakaze zibuyekezwe kusukela kwasungulwa imfanelo ye-rel = 'nofollow'. Amabhulogi amaningi asasetshenziswa futhi okuthunyelwe okusha kuyangezwa njalo. Amaningi ala mabhulogi alinganiswa ngokuseduze noma agcwaliswe ngogaxekile wamazwana ebhulogi.
Uma uzama ukwakha iphrofayili yakho ye-backlink nginga hlala kude nokuthunyelwe kwebhulogi namanye amazwana we-spammy. Akunakulindeleka ukuthi ujeziswe ngokuthumela izixhumanisi eduze kwezixhumanisi ze-spammy, kepha i-Google ivame ukukhomba lawa makhasi agcwele ogaxekile bese iwahlunga kusuka kugrafu yawo yokuxhumanisa.
Ezimweni eziningi umzamo wokwakha iphrofayili yakho ye-backlink ngokuthumela izixhumanisi zamazwana ebhulogi awufanele umzamo njengoba lawa masayithi ngokuvamile aqukethe izixhumanisi eziningi zokuphawula ukuthi inani le-PageRank lihlukaniswe kakhulu ukudlula inani elikhulu. Ibhulogi izixhumanisi zokuphawula ezinesici se-rel = 'nofollow' ngeke zidlulise noma yiliphi inani kuwebhusayithi yakho.
Tags: ama-backlinksimibonoInjini yokuseshaseo
Ukuphathwa Kwezenhlalo Nokuphikiswa
Feb 27, 2010 ngo-10: 01 PM
Lokhu ulwazi oluvelele. Inothi elilodwa engingangeza nokho, ukuthi ukunikela ngamazwana amahle kubhulogi lenye ibhulogi kungakunika ukunakwa. Lapho ngiqala ukubhuloga, ngiphawula kaningi kumabhulogi futhi ngibanikeza okuqukethwe okuhle nengxoxo ngabo. Abaningi baqaphela futhi baqala ukuxhumanisa nebhulogi yami. Ngiyazi ukuthi lokho akuyona ukuhweba okungu-1: 1 kuma-backlinks, kepha kungathela izithelo!
Futhi - bengicabanga ukuthi uGoogle ubeseyishintshile indlela abaphatha ngayo i-nofollow and dofollow ngenxa yalokho abafana be-SEO ababekwenza ngokuqopha ikhasi… akunjalo?
Okuthunyelwe okuhle! Ngiyabonga!
Feb 28, 2010 ngo-3: 48 PM
@Doug - Ihlobo eledlule kwaSMX Advanced Matt Cutts liphakamise ukuthi kufanele sicabange ngePageRank "njengokuhwamuka" lapho kufakwa imfanelo engeyona. Uma simthatha njengezwi lakhe lokhu kungasho ukuthi awukwazi ukwakha noma ukubaza i-PageRank yesayithi lakho usebenzisa imfanelo engeyona.
Ukuze kube lula masithi okuthunyelwe kwebhulogi yakho bekunevelu ye-PageRank engu-10 Unekhono lokudlulisa leli nani kwamanye amakhasi wewebhu ngezixhumanisi. Uma uxhumanisa amanye amakhasi ayi-9 ngaphakathi kwewebhusayithi yakho kanye ne-1 iwebhusayithi yangaphandle, ulahlekelwa yi-10% yenani lePageRank obungalokhu ugeleza kuwebhusayithi yakho. Lapho imfanelo engeyona elandelayo yamukelwa i-Google, ama-SEO anobuhlakani azamile ukufaka le mfanelo kusixhumanisi sangaphandle kulesi simo ukugcina wonke ama-PageRank awo. Umcabango bekungukuthi lokhu kuzoqinisa amanye amakhasi angaphakathi wewebhusayithi yabo. Uma sikholelwa ukuthi uMat Cutts mayelana nePageRank ayahwamuka maqondana nokulandelayo, khona-ke iqhinga lekhasi le-PageRank lokuqopha ngale mfanelo alinalutho.
Feb 28, 2010 ngo-3: 49 PM
Kubalulekile ukusho ukuthi kusekhona ukubaluleka kokuxhumanisa nezinye izinsiza ezibalulekile kokuthunyelwe kubhulogi lakho. Cebisa okuthunyelwe kwakho kwebhulogi ngamavidiyo, izithombe, izixhumanisi nolwazi oluwusizo. Kungenzeka ukuthi uthole inani le-PageRank elingaphezulu kakhulu kulabo abakhetha ukuxhumanisa nokuthunyelwe kwebhulogi lakho kunalokho ongalahlekelwa ukukuxhuma kwesinye isisetshenziswa esibalulekile noma ezimbili. “Nikela uzokwamukela”, “Abaphiwa bathole”, i-karma, njll. Uyalithola iphuzu. Kuyasebenza.
Feb 28, 2010 ngo-3: 50 PM
Ngingathanda futhi ukuqaphela ukuthi i-Google iyaligodla ilungelo lokungazinaki izimfanelo ezingezona. Cishe abasoze basishalazela lesi sici kuzixhumanisi zamazwana ebhulogi. Bangakhetha ukungayinaki le mfanelo kumasayithi athandwayo ezokuxhumana nabantu njenge-Twitter uma sebethole ukuthi yimaphi ama-akhawunti abangathembela kuwo. Esinye isibonelo kungaba ukuthi ngabe iCNN.com ikhethe ukufaka okungekho okulandelayo kuso sonke isixhumanisi. I-Google ingahle ingazinaki izimo eziningi zemfanelo ngoba bayethemba ukuthi izixhumanisi ku-CNN.com ziyizinkulumo ezibalulekile zokuhlela zewebhusayithi.
Mar 1, 2010 ku-2: 34 AM
ngifunde okuthunyelwe okumbalwa kwebhulogi ngalesi sihloko futhi bonke babonakala bekhuluma kakhulu ngokuphawula kwebhulogi njengogaxekile. Umbuzo wami ukuthi uma uphawula ngebhulogi elilandelanayo elinamazwana alinganiselwe ahambisana nesayithi lakho ngamazwana angempela? Izinjini zokusesha ziziphatha kanjani lezi zixhumanisi? Ngabe izixhumanisi zibiza kancane kumazwana kunokuthi ngabe zisemzimbeni wokuthunyelwe kwebhulogi?
Mar 1, 2010 ku-10: 04 AM
Okuthunyelwe okuhle, uJeremy.
Ngaphandle kokubaluleka, okungokoqobo noma okubonwayo, kwama-backlinks avela kumazwana ebhulogi, lesi yisibonelo sokuthi konke kwehlela kokuqukethwe.
Ukuthumela imibono efanele, enokuqonda kumabhulogi kusengasiza ukuhambisa abasebenzisi kusayithi lakho nakumasevisi akho. Ngokuzibeka wena, ubuntu bakho, idumela lakho laphaya kwabanye uzibeka njengegunya elizofunwa ngabantu.
Mar 1, 2010 ku-11: 38 PM
Isixhumanisi sokuhlela esithembekile esifakwe kumazwana ebhulogi angenayo imfanelo ye-rel = 'nofollow' isixhumanisi esivumelekile ku-Google.
Mar 9, 2010 ku-1: 46 PM
Ngokuqinisekile xhuma ukwakhiwa ngamabhulogi afanayo / ajwayelekile emakethe yakho ye-niche kungakwenza uhambise ithrafikhi kusayithi lakho. Ngokwazi kwakho ukunikeza imibono ethokozisayo, ungeza inani kulokho okuthunyelwe yi-blog'ss, abanikazi bebhulogi bangakujabulela ukuthola lawo mazwana futhi bakuvumele ushiye isixhumanisi sakho futhi.
Ngincoma ukujoyina ingxoxo mayelana nokuthi yini eyenza ukwanda kwesikhundla sekhasi lewebhusayithi ku- Startups.com! Ungakulandela lokhu http://bit.ly/cCgRrC link ukuze uqonde ngqo embuzweni nasezimpendulo esezithunyelwe ezinye izazi.
Mar 31, 2012 ku-3: 07 AM
UJeremy, uma umuntu esebenzisa i-WordPress CMS, akukho lungiselelo lokukhetha ngokunika do do = landela isimo kumhlaziyi othile. Umuntu ubhekana kanjani nalokhu?
Futhi, kunale nkulumo yokuthi "akufanele wabelane ngezinga lekhasi lakho namanye amawebhusayithi". Ngabe bukhona ubunyoninco kule mpikiswano nganoma yini?